Xubin ka noqo - Svenska Livräddningssällskapet
Hem > Olika språk > Somalia > Xubin ka noqo
The Swedish Life Saving Association waa urur udiiwan gashan aan ushaqeyn in faa'ido helo una shaqeeya in uu kordhiyo badbaadaba miyaha ee Sweden. Waxaan tababarnaa macalimiin dabaasha bixiya iyo waxaan kaloo leenahay iskuulo dabaal.
Waxaan tababarnaa dad ilaaliyaha warta biyaha, harooyinka iyo xeerbta. Waxaan bixinnaa macluumaad ku saabsan badbaada biyaha iyo oo waxaan ka qeyb qaadanaa soo saarista qalab cusub ee nafbadbaadinta biyaha. Ururadeena ka kooban 24 degmo aad bay ugu faraxsan yihiin in aan caawiyaan mas’uuliyadaha degmada iyo shaqsiyaadka gaarka ah in ay siyaan talo ayna kordhiyaan badbaadada biyaha.
Haddii aad adigana jeceshahay in aad caawiso, adigana aad ayaan kuugu soo dhaweyneynaa in aad xubin soo noqoto oo sidoo kale waxaan aad u soo dhaweyneynaa tabarucaadda aad ku gargaareyso ururkeena.
Sweden inay sabeyso ayaan ku haynaa